Kutheni i-FEELTEK-FEELTEK Laser Technology Co., Ltd.
Malunga neNkqubo yokuJolisa eDynamic
2D Scanhead Uthotho
2.5 Uthotho lweScanhead
3D Scanhead Uthotho
Ukusetyenzwa kweNdawo enkulu
360 ° Ukujikeleza
Ukuqhubela phambili amava omsebenzisi wokugqibela
Nikeza isiqinisekiso somgangatho wonke
100% Ukufunyaniswa kweqondo lobushushu
Inkqubo epheleleyo yexesha lokwenene lokuhlola ukukhukuliseka kobushushu
Isiphumo sengxelo yedatha yokwenyani
Ngokuphinda-phindwe kaninzi komqhubi kunye ne-motor sensor, i-FEELTEK ibonelela ngokuchaneka kokuma okuhle ukuqinisekisa ukucwangciswa komphezulu ochanekileyo.
Ngokusebenzisa umqhubi kunye ne-motor sensor, kunye ne-amplifier, senza uxinzelelo lwe-drift olulawulekayo.
Ukukhawulezisa ukusebenza kunye nolawulo olugqithisileyo
Isantya semoto kunye nokusebenza okukhawulezileyo sisiqinisekiso sokuchaneka kwekona kunye ne-overshoot, oku kukwangumgangatho wokungena wokulungisa ngokuchanekileyo (ukuzaliswa kwesantya esiphezulu, i-etching.etc)
Qinisekisa isantya esifanayo kunye nokuchaneka kwe-XY.
Qinisekisa ukuchaneka kokuzaliswa kunye nokujikeleza kancinci.
Phucula iparamitha yokuzaliswa kwengelosi kunye ne-dither yomgca othe ngqo.
Ulungelelwaniso lwe-Axis ye-Z
Ngokusebenzisa i-platform ephezulu yokulinganisa i-sensor ye-sensor ye-platform, i-FEELTEK yenza umgca, isisombululo kunye neziphumo zedatha ye-drift yeqondo lokushisa kwi-axis eguquguqukayo inokubonakala.Umgangatho uqinisekisiwe.
●Ithagethi yolungelelwaniso: Ukuchaneka kwendawo, ukukhukuliseka kobushushu kunye nomgca we-Z axis.
●Indlela yokulinganisa: umfumani woluhlu oluchanekileyo oluphezulu.
●Isixhobo sokulinganisa: SICK (C30T05) .
●Iimpawu zesixhobo sokulinganisa: Uluhlu: 30mm, Ukuchaneka: 0.3μm, isithuba seSampuli: 12.5μs.
umgca: 99. 5%@3 °
ubushushu drift: ≤4 μm@4hours
isisombululo: ≤1.2 μm
Siyikhulula itekhnoloji kumashishini amaninzi e-3D wokusetyenzwa kwelaser, njengokumakishwa kwelaser ye-3D, ukukrolwa, ukuwelda kwelaser, ukomba, ukuvelisa okongeziweyo, unyango lomphezulu kunye nezinye iintlobo zezisombululo zokusetyenzwa kwelaser.
I-3F-5F yeSakhiwo I, iZiko loPhuhliso lweNzululwazi kunye nobuChwepheshe, uMmandla woRhwebo oSimahla iZhangjiagang, isiXeko saseSuzhou, kwiPhondo laseJiangsu
© Copyright 20102021 : FEELTEK Laser Technology Co. Ltd. Onke Amalungelo Agciniwe.